मार्टिन व्रिजल्याण्ड को हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
मार्टिन भ्रिजल्याण्ड को हो र उनले लेख लेख्छन् किन? मार्टिन भ्रिजल्याण्ड एक पत्रकार, लेखक र अन्वेषक हुन् जसले अब नेदरल्याण्ड्समा वास्तविक सत्य खोजीका लागि सबैभन्दा ठूलो वेबसाइट छन्। २०१२ मा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रबन्धकको रूपमा आफ्नो जागिर छोडे र फरक आवाज निकाल्ने निर्णय गरे। त्यस पछि तपाईंसँग मुख्य रूपले मुख्यधारको मिडिया र केही वैकल्पिक मिडिया वेबसाइट थियो। त्यो बाल्यावस्थामा अझै पनि अपेक्षाकृत थियो। त्यस पछि उसको वेबसाइट नेदरल्याण्ड्सको सब भन्दा ठूलो आवाज भएको छ।
धेरै लेखहरूमा म त्यस्तो चीजको बारेमा बोल्छु जुन तत्काल सकारात्मक जस्तो देखिँदैन, तर यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सोच्छौं कि केवल मुख्यधारको मिडिया स्थापना गरिएको अर्डरको जेबमा छ, तर के यो सिक्काको अर्को छेउ पनि उही क्लबको पकेटमा छ? यो नेदरल्याण्डमा वैकल्पिक मिडिया पूर्ण नियन्त्रण छ कि हुन सक्छ?
मेरो शाब्दिक अर्थ "गुप्त सेवा द्वारा नियन्त्रित" हो। नेदरल्याण्ड्समा, त्यो क्लबलाई AIVD भनिन्छ। त्यो प्रमाणित गर्न, तपाईले वास्तवमा घुसाउनु पर्छ। मैले अनियोजित गरें। त्यहाँ केहि घटनाहरू भएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप म ती वैकल्पिक मिडियाद्वारा उल्लेखनीय रूपमा समावेश गरिएको छैन। त्यसोभए म के गर्ने छु भन्ने मेरो लेखकको रूपमा मेरो उदयको इतिहासलाई संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्ने र रूपरेखाको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु हो जुन तपाईं आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं मेरो रायसंग सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
जब मैले २०१२ मा लेख्न सुरू गरें, यो मेरो लागि सँधैको लागि चाहाना थिएन। मेरो अन्तिम नियोक्ता जहाँ म एक अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गर्थे त्यो दिवालिया भयो र मैले लिएको जागिर पछि म अचानक 'टेलर-मेड सूट र लीज कार' बाट तंगै गएँ। मैले केहि समयको लागि लेख्ने निर्णय गरें (मैले 'अस्थायी रूपमा सोचेँ') र मेरो सीभी बिगार्न नपरोस् भनेर एक छद्म नाम छनौट गरे। त्यसैले म आफैंलाई घनिष्ठ परामर्शमा हटाइयो, जसको मतलब म लाभका लागि हकदार थिएँ। यो लेखन आर्रेन जीवाट द्वारा (अब डिफन्ट) वेबसाइट अर्गुसोगमा लेखबाट शुरू भयो र मेरो आफ्नै वेबसाइटमा समाप्त भयो।
केही महिना पछि, मेरो वेबसाइट अचानक अनास Aauragh मामला को समयमा एक दिन १ 150०,००० पटक भ्रमण गरियो। यसको कारण मैले क्यामेराको साथ 'अपराध दृश्य' मा जाने निर्णय गरें, किनकि पीटर आर डी भ्रिसले टिभीमा भनेका थिए कि प्रत्येक कपाल र हरेक फाइबर यस (स्वयं) हत्याको मामिलामा जांच गरिनेछ। म उत्सुक थियो कि त्यो वास्तवमा यो मामला थियो र स्थानमा एक शौकिया क्यामेराको साथ गए। त्यहाँ मैले एक्सा फेला पारेको ठाउँमा धेरै कचरा फेला पारेको थियो र साक्षीहरूले भने कि उनी त्यहाँ आफ्नो कुकुर त्यहि बिहान छोडेनन्। त्यसोभए त्यसो भए सबै नीदरल्याण्डहरू कब्जा गरियो र मैले एनएफआई स्वतन्त्रता रिपोर्ट प्रकाशित गरें। त्यो समाचारमा ठूलो भयो, किनकि कसैले पहिले कुनै पनी छैन, तर मेरो नाम उल्लेख गरिएको छैन (जसले मेरो साइटमा थप दर्शकहरूलाई पनि दिनेछ)।
लगभग त्यहि बेला म त्यस व्यवसायमा जान्छु, म सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र विवेककारीसँग आक्रमण गरें र धेरै व्यापक र अत्यन्त विस्तृत घोषणाको बावजूद, यो दिन यसबारे केहि गरेन। यसबाहेक, त्यहाँ कुनै वकील छैन जुन प्रक्रिया प्रक्रिया जलाउने हिम्मत छ जब मैले व्याख्या गरे कि यो अभियान सरकार कोनेबाट आउँछ। विद्रोही वकील सभन ह्यूलेमनले मलाई पनि कुनै जवाफ पाएनन्।
वैकल्पिक मिडिया त्यो समयमा हलचल भइरहेको थियो र म कमसे कम साईटहरू र व्यक्तिहरू द्वारा अवशोषित भएको थियो जुन मैले लेखकको रूपमा शुरू गर्नु भन्दा पहिले सायद कतै सुनेको थिएँ। मीका क्याट ती मध्ये एक थियो। मलाई फ्रन्टियर सिम्पोजियममा पनि आमन्त्रित गरियो र 'फ्रन्टियर अवार्ड' को लागि पनि नामांकन गरिएको थियो।
त्यसपछि मैले पहिलो कुरा याद गरे। उदाहरण को लागी, म द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा जॉन कन्मेमुलर, तर अचानक त्यो अब साम्राज्यमा जान सकेन। मेरो प्रदर्शन फिलिम गरिएको थियो, तर जहाँ पनि प्रसारण हुँदैन। मार्सल मेसिंग (वैकल्पिक मिडियामा एक प्रसिद्ध नाम) मलाई केहि सम्मोहनवादी को समाप्ति शो पछि एक कोठा मा गयो। यहाँ उनले मलाई निजी सावधानी दिए कि मलाई धेरै सावधान हुनुपर्दछ। "तिनीहरू" मलाई मलाई निर्देशित ऊर्जा हतियारमा लक्षित गर्न सक्थे।
वैकल्पिक मिडियामा मेरो टर्नआउटले हालसम्म दर्जनौं साइटहरु द्वारा भयानक विरोध गरेको छ जुन मैदानबाट उत्पन्न भएको छ, विशेष गरी मेरो ठेगानामा लिबिल र निन्दाको लागी। मैले पत्ता लगाए कि यो मानहानि र दुर्व्यवहार को पछि ड्राइभिङ्ग बल एक राज्य कर्मचारी हो (ओटीओ पुजारी) जेरोन हगोगोइजे , जो त्यस समय शाब्दिक मीच क्याटको छेउछाउको कुनामा थियो।
जे होस्, म मीच क्याट द्वारा अ emb्गालेको थियो। त्यतिन्जेल, वैकल्पिक मिडियामा क्याट नै ठूलो नाम थियो, किनकि उसले वर्षौंदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायकर्ता जोरोस डिमिन्कको पेडोफिलियासँग लड्दै थियो। क्याटले मलाई फाउंडेशन डे रोस्टिज स्पिजकरको डिममिन्क प्रक्रियाहरूमा आउन आमन्त्रित गर्यो र मेरो ईन्धनको लागि भुक्तान गर्‍यो। यो सबै समयमा, क्याटले पैसा फाल्न सक्षम देखिन्थ्यो जस्तो कि यो केही पनि थिएन, त्यसैले यसले आँखा समात्यो। सुनुवाइको क्रममा मैले पत्ता लगाए कि डिमिन्कलाई मुद्दा हाल्ने फाउन्डेसनका सदस्यहरू मेरो बारेमा धेरै हिचकिचाउँन् र चिन्तित थिए। त्यसले मेरो चासो जगायो। किन तिनीहरू मप्रति यति चिन्तित थिए? म उनीहरूको शिविरमा थिएन?
जब मैले फाउण्डेशनको कुनै सदस्यको अ the्गमा सुन्तलाको रिबन देखे, तब मैले सोचे कि फाउंडेशनको कुनै सदस्यले डच राज्यमा बढी वा कम आक्रमण गर्नेले कसरी नारंगी रंगको रिबन लगाउन सक्दछन्। त्यसोभए मैले त्यो जगमा भएका मानिसहरूका पृष्ठभूमिमा खोल्न शुरू गरें। उदाहरण को लागी, मैले यो तथ्य थाहा पाएँ कि यस रिबन वाहक (बेन ओटन्स भनिन्छ) ले Schiph वरपरको मैदानहरुको मूल्य कृषि गन्तव्यबाट निर्माण जग्गामा अपग्रेड गर्न मद्दत गरेको छ।
यस फाउण्डेशनलाई रोटेज स्पिजकरले आर्थिक सहयोग गर्ने पूत परिवारले डच राज्यबाट ती जमिनहरू (काल्पनिक विकास परियोजना लगायत) को लागी अरबौं दाबी गर्न सके। मैले यो पनि फेला पारे कि फाउण्डेशनले मिलेर काम गर्यो ज्याक एब्रमोफएक व्यक्ति जसले यौन दुर्व्यवहार चलचित्रहरूको साथ अमेरिकामा 'उच्च-श्रेणी' गरेको थियो। त्यसैले मैले गम्भीर रूपमा र गलतीले पत्ता लगाए कि क्याट पट परिवार द्वारा वित्त पोषित भएको थियो र यो सबै एक महान धोखाधडी हुन गयो। यसकारण डेमकिंक विरुद्धको मामला pedophile दुर्व्यवहारको वास्तविक क्षणको वरिपरि घुमाउँदैन, तर स्पष्ट रूपमा डच राज्यको विष्फोटको बारेमा धेरै बढी।
तथापि, उस समय वैकल्पिक मीडिया मा सबै वेबसाइटहरु उनको (जब सम्म कि) नायक मीका काट को दुरुपयोग को सामना नहीं गर्न चाहन्थे। मलाई एक रेडियो प्रसारणमा निमन्त्रणा गरिएको थियो जसमा मैले पत्ता लगाएको छु कि मैले के खोजेको छु। मलाई सूचित गरिएको थियो कि यो 1 साक्षात्कार मा एक 1 हुनेछ, तर प्रत्यक्ष प्रसारण को समयमा यो अचानक घोषणा गरेको थियो कि मिका काटा प्रसारण मा पनि थियो। एक परिष्कृत विधि थियो, तर म बस उहाँले पन्जा परिवार द्वारा भुक्तानी भएको थियो र साँच्चै ज्याक Abramoff संग काम गर्ने wrest गर्न व्यवस्थित किनभने प्रसारण कैट सानो राम्रो गरे। सम्पूर्ण वैकल्पिक मीडियाले मलाई पाराहको रूपमा बेवास्ता गरेको छ। तिनीहरूले बाहिर यो opprobrious र slanderous आक्रमण मा मेरो लागि यो सबै गरे र शायद मेरो लेख लिंक राखिएको सबै (अलग Niburu.co र Micha कैट गरेको Whistleblower अनलाइन साइट बाट) थिए वा छैन, तर अब तिनीहरूले मलाई जोसका आक्रमण दिनु भएको थियो र पनि मिका काटीबाट मेरो एक्सपोजरको कारणले आक्रमण।
यो सबै हुनु भन्दा पहिले मलाई मार्सल मेसेन् byले एक पटक देशको दक्षिणमा वैकल्पिक मिडियामा सेनामा सामेल हुन एक किसिमको बैठकमा आमन्त्रित गरिसकेका थिए। त्यो समयमा मैले केही समर्थन प्राप्त गरें किनभने मैले मेरो इन्धनको लागत पूरा गर्न दान दिएँ।
यो स्पष्ट थियो कि मेरो बेरोजगारी लाभको म्याद सकिन लागेको थियो। त्यस समयमा म बिरलै भेटहरू गर्न सक्थें र त्यतिखेर मेरो घरबाट जबरजस्ती एन्टी स्क्वाट बाँच्नको लागि मैले पहिले नै निष्कासन गरिसकेको थिएँ। त्यसकारण मैले 4,5. hours घण्टा र hours. hours घण्टा पुरानो ईन्धन-गुज्लि gu कारमा ड्राइभ गर्नुपर्‍यो। वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरूको त्यो बैठकमा जहाँ व्यावहारिक रूपमा त्यस वैकल्पिक मिडियामा नाम र प्रख्यात सबै जना उपस्थित थिए (मार्सेल मेसेनिंग, विज्ञापन ब्रोयर, गिडो जोन्करहरू, आदि), एक सहकारीको स्थापनाको बारेमा छलफल गरियो। वैकल्पिक मिडियाका लागि संग्रह च्यानल हुनुपर्‍यो। मार्सेल मेसिingले स millions्केत गर्‍यो कि उनी लाखौं मानिसहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्तिलाई चिन्छन्। मैले सोचे कि यो एउटा उल्लेखनीय अवलोकन हो र यसले प्रश्न उठायो कि ती "व्यक्तिहरू" को हुने छन्। मैले कहिले पनि फेला पारेन, किनकि मेरो उपस्थिति एक पटकको थियो। मीका क्याटको एक्सपोजरपछि म स्पष्ट रूपमा एउटा खतरा भएँ।
यसको साथ एक दाँत
चूंकि 2014 मैले अचानक दृश्यमा नयाँ नाम देखाए। Irma Schiffer नाउँ गरेकी एक महिला अचानक देखा परे म broached शीर्षकहरूमा लेख लेख्न र त्यहाँ शुरू गर्न वैकल्पिक Martijn Vrijland यो Irma Schiffer को रूप मा थियो भने यो देखिन्थ्यो। यो महिलालाई राम्ररी थाहा छ सबै ज्ञात साइटहरु वैकल्पिक मीडिया मा। हामीले पनि जेनाका माउन्उन्वर नामक एक पुरानो पत्रकार पनि देखाएका थियौं जुन जर्मन पत्रकार उड उल्कोटोले जस्तै गरेका थिए। Ulfkotte 17 वर्ष Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'वा' FAZ 'को लागि काम र उहाँले सीआईए कहिलेकाहीं पत्रकार bribed कि घोषणा जसमा एक पुस्तक बाहिर आए। नेदरल्यान्ड्स पछाडी रहन सकेन, त्यसैले हामीले मिठाई र विश्वसनीय जेनाका मुन्सौवरको रूपमा आफ्नै आफ्नै 'उडो उल्कोकोट' पाउनुभयो। उनले डच पत्रकारिताको बारेमा धेरै वा कम प्रचार गरे। क्लब चाहनेकोको, अर्थ मन्टर, र धेरै अन्य साइटहरु लाई उत्सुकता देखि उपरोक्त नयाँ नाम को प्रचार गरे। यो वास्तवमा जागिरको डचम्यान सुनेको थियो।
हामी अचानक Martijn वैन Staveren, विलियम Felderhof र Coen Vermeeren रूपमा थुप्रै अन्य नयाँ नाम को उद्भव देखे। सबै मानिसहरू "साजिश सिद्धान्त" वा आध्यात्मिकताको उप-क्षेत्रहरूमा संलग्न थिए। त्यो अचानक उठेर जमीन बाहिर springing र यो 2013 मेरो धेरै सक्रिय अवधि देखि, अचानक नेदरल्यान्ड मा मान्छे को Awakening फसाउन एक आरोहण ठूलो भएका थिए, त्यो देखिन्थ्यो। यसलाई छ वा छैन विश्वसनीय छ जसले तपाईंलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ, 1 1 र filleting लागि यी सबै नामहरू छलफल गर्न मेरो इरादा छैन। म केवल मेरो धारणा को वर्णन गर्दछु। मार्जेजेन भ्यान स्टेभेन मैले पहिले नै छलफल गरेँ; विलियम फेल्डर्वरको अचानक एक सम्मेलन श्रृंखला पछि 'ओपन मेन्ड' भनिन्छ र कोन वर्मेर्नेनले आफूलाई आफु र एक्सएनएनएक्सएक्स विशेषज्ञको रूपमा खिचे।
यी सबै नामहरू साधारण छन् उनीहरूको छिटो टर्नआउट र उनीहरूको जस्तो असीमित बजेटहरू, अवसरहरू र 'राम्रो प्रोफाइल' र वैकल्पिक मीडिया देशहरूमा सबै चीज र सबैलाई उनीहरूको प्रमोशन। त्यो र तपाईं गर्दा प्रतिशोधी, डाह, निराशाले वा आत्म-सिर्जना अलग्गै 'मार्टिन Vrijland विचार गर्न सक्छौं चाहनुहुन्छ, यो रूपमा सकारात्मक विचार सक्छन्। त्यो पनि होइन। म बरु उल्टो दृश्य समाचार र वर्तमान मामिलामा मेरो आफ्नै दृष्टिकोण लेख्दै ध्यान गर्न, सत्य खोज्नेहरूको राम्रोसँग मिलेर काम गर्न आए हुनेछ, तर प्रजा शाब्दिक अपहरित कि म याद र अक्सर desinfo लिङ्क छन् किनभने वा गलत पटरिहरु, मलाई एक स्पष्ट चेतावनी दिइन्छ। म पनि यो तथ्यलाई सम्झाउँछु कि वैकल्पिक मिडियाका सम्पूर्ण वेबसाइटहरूले मलाई पराजित गर्यो (र पलबाट निस्केको) मैले धोखाधारी मीका काटलाई पराजित गरे। यसले एक घण्टी बजाउनुपर्छ।
के सबै नयाँ ब्रान्डिङिङ मशरूम पनि सामान्य छन् कि उनीहरूको 'साजिश सिद्धान्त' को उद्घाटन गरेर प्रभावित हुने लाग्दैन। के गर्नु पर्दछ? यो मेरो मामला मा भयो भनेर उल्लेख गर्न कम्तिमा उल्लेखनीय छ। यो स्वतन्त्रताको साथ समाप्त भएन र घोटाला, कैदी, आक्रमण र यति खतरनाक थियो, तर अहिले सम्मसम्म पुग्यो कि मेरो उमेर सहित उमेरको उमेर, आवासको ठाउँ र स्कूलको बारेमा सबै विवरणहरू पोस्ट गरिएका थिए। तर त्यो पुरा तरिकाले अनियमित बने र उन वैकल्पिक मीडिया साइटहरु द्वारा नियुक्त नहीं गरे। हो, सम्भवतः तपाई आफैलाई यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, विचार हुन सक्छ, तर तथ्य आविष्कार गरिन्छ र घोषणाहरू कुरा गर्दैनन्; तथ्य यो कि एक राज्य कर्मचारी को आस्तीन देखि आना साबित भएको छ; तथ्य यो हो कि यस्ता आक्रमणहरू अन्य न्यु योर्कहरूबाट अनुपस्थित छन्; तथ्यमा थपियो कि उनीहरूले एक-अर्कालाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्छन्, केही प्रश्न उठाउनुपर्छ। के हुन सक्छ कि तिनीहरू सबै प्रशिक्षित र AIVD द्वारा सुरु भएको थियो? या त्यो एक साजिश विचार हो?
एक मिनेट पर्खनुहोस्। त्यसोभए हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि सरकारहरूले झूटा झण्डा कार्यहरू र प्रचारका प्रयोग गर्छन् र मुख्य प्रवाह माध्यम प्रयोग गर्छन्, तर हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं कि एक गुप्त सेवाको जेबमा वैकल्पिक मिडिया छ? तपाई किन एक चाहनुहुन्छ? बस यति खतरनाक आंदोलन अस्तित्व रहन? व्लादिमीर लेनिनले पहिले नै बताए कि प्रतिरोध नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो कि विरोधको नेतृत्व गर्न हो। अथवा त्यो मात्र हो जुन पुरानो, अनावश्यक सोभियत युनियनमा लागू भएको हो? के हुन सक्छ कि नीदरल्याण्डका AIVD ओक्टोपस हतियार धेरै व्यक्तिहरु भन्दा धेरै सोच्न भन्दा बढी धनी हुन सक्छ? यो हुन सक्छ गोठाला डच वैकल्पिक मीडियाको मार्सेल मेसिंग, जसले उच्च श्रेणीका सर्कलहरूमा आइपुग्यो र फ्रीमोसोरीमा अनदेखी छैन, नेदरल्यान्डमा यो सिद्धान्तको संस्थापक हो? राम्रो विरोध आचरण गर्न, तपाईंले तिनीहरूलाई खोज्नु भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ: 'सत्य'।
सत्यको लागि तपाईंको खोजमा, बिन्दु यो हो कि तपाई कम्तीमा यो भावना छ कि 'यो वास्तवमा पक्का छ'। त्यसपछि तपाईं ईरेका क्षणमा जानुहुन्छ जहाँ सबै मुख्यधारा मीडिया र यसको स्पष्ट प्रचार को बारे मा निराश हुन को लागी छ र (अधिकतर) झूट छ। यो लाग््छ कि यस आवश्यकता को बारे मा 2014 को बारे मा एक उच्च गियर मा प्रवेश गरेको छ। उदाहरणका लागि इरमा Schiffers, यसको साथ धेरै व्यस्त छ। वैकल्पिक मीडियामा हरेकको लागि केहि छ। के तपाईं विश्वास छ कि पृथ्वी फ्लैट छ? त्यसपछि तपाईंले त्यो प्राप्त गर्नुहुनेछ। एलियन्स वा यूएफओहरूमा विश्वास छ, तपाईं बहु च्यानलहरूमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईं पनि आध्यात्मिक "सुदृढिकरण" भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जसले कसैलाई मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन जस्तै। के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि बालबालिकालाई बलिदान दिइन्छ? त्यसपछि तपाइँ हालै नै "पूर्व-बैंकर र इन्टरनेटर" रोनाल्ड बर्नार्डसँग भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि निस्सन्देह त्यहाँका विषयहरू छन् जुन सबैले अहिलेको बारेमा आफ्नो कान खरिद गर्दैछ: 911, vaccinations and chemtrails। तपाइँ WantToKnow, पृथ्वी Matters, Ninefornews र यति मा सेवा गरिनेछ। हामी लगभग यसलाई 'वैकल्पिक मिडिया चर्च' भन्छौं र त्यो चर्चलाई स्वाभाविक रूपमा अपरिचित मन्त्रीहरू चाहिन्छ। राम्रो पृष्ठभूमि, पुरा ज्ञान र प्रेरणादायक कथा संग पादरी। पनि हिम्मत गर्नेहरू पृथ्वी च्याप्टो र "झूटा झण्डा अपरेसन" कहिले काँही सायद चकमा या व्यक्ति कल तपाईँले खेलेका छ zoal टिभी प्रचारकहरूको अमेरिकी सार्वजनिक कहिल्यै प्ले, तपाईं मा चाहँदैनन् भन्ने छैन भनेर कल गर्न चर्च।
यो सत्य खोज्ने तपाईंको आग्रहको बारेमा हो। यो आग्रह मुख्य मुख्य मीडियाको दुर्व्यवहार र धोकाको लागि धेरैको जागरणको एकदम स्पष्ट स्पष्ट परिणाम हो। तर सत्य पत्ता लगाउन, तपाईंले आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्न सिक्नु हुँदैन। तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं एक ठोस र विश्वसनीय विश्वासको साथ यो उत्तम पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ: वैकल्पिक मिडिया चर्च। यस तरिकामा तपाईं एक पटक फेरि सेवकाईलाई भरोसा गर्न सिकाउनुहुन्छ, किनभने पादरीले चर्चवर्गहरूलाई लुपिटको सत्य प्रचार गरे। यस तरिकाले तपाइँ एक पटक फेरि वैकल्पिक मिडियाको नयाँ सेवकहरूमा भरोसा गर्न सक्नुहुनेछ। र यही कारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं जान्दछन् कि तपाईं विश्वसनीय पादरीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई विश्वसनीय सत्य चिन्नु भएको छ किनकि तिनीहरूले यसको खोजी गरेका छन्। त्यसपछि तपाईं आफैलाई केहि गर्न पनि छैन। तपाईंसँग कुनै समय छैन र पास्ताले यसको लागि अध्ययन गरेको छ। खैर, यो कोपरपेई भेरी मीडियाको सन्देश हो; यो पहल जुन स्पष्ट रूप देखि विज्ञापन ब्रेरे र इर्मे Schiffers द्वारा शुरू भएको छ, तर वास्तव मा वैकल्पिक मीडिया को आस्तीन देखि आउछ जो दृश्यहरु को पछि एकसाथ काम गरिरहेको छ। यो मार्सल मेसिंग संग बैठक मा मेरो एक उपस्थिति को समयमा पहिले देखि चर्चा गरिएको पहल हो।
हालैका वर्षहरूमा कस्ता रणनीतिहरू छन्? यो अनलाइन मानहानि र निन्दा मार्फत अनावश्यक अनुसन्धानकर्ताहरूले मार्टिन Vrijland छुटकारा रही कि बाहिर थाल्दा, जो यति अचानक ती अनावश्यक लेखक नयाँ अंतर्दृष्टि सामना पाठकहरूलाई हरेक दिन हजारौं थिए "हरेस", परिणाम थिएन। त्यो रिसा बन्द भयो र कि रिसार्नु पर्ने थियो, खेतको मैदान पेटीहरू संग पूर्ण योजना बनाई थियो। धेरैजसो रूखहरू सबैले बिस्तारै बढ्न सक्थे र सबैले उल्लेख गरिएका विषयहरूको बारेमा केही रोचक कुरा गर्न सक्थे, तर सधैँ एकदमै फरक फरक थियो। यी वैकल्पिक मिडियामा वेबसाइटहरूको जंगल स्थापित गरियो। त्यो जंगल सबै कि पहिले नै राम्रो मार्सेल पीतल र Guido Jonkers रूपमा समन्वयन गरेर सँगै समन्वित ती साइटहरूलाई काम गरे AIVD द्वारा र दृश्य पछाडि पहिले नै नियन्त्रण समय थियो, तर यो रूपमा दृश्य क्षेत्रमा आँखा थियो अचानक स्पष्ट छैन en अधिक जानकारी। तपाईंले वनहरू अबदेखि जंगल देख्नुभएन! र त्यो वास्तवमा इरादा थियो। र टाडा! अचानक त्यहाँ केही विश्वसनीय-हेर्ने बुबा र आमा प्रकारहरू छन् (पहिले नै एउटै कष्टबाट आएको छ)। विश्वसनीय भरोसेमंद अर्थशास्त्री विज्ञापन ब्रेकर्स र विश्वसनीय लगिरहेको इरमा शिकारीहरू। के त्यो तपाईंलाई धेरै राम्रो 'महसुस गर्ने सामग्री' प्रदान गर्दैन? र बेशक हामी सधैँ सधैँ मीठा र खुशी छौँ Arjan बोस्ट ओभर म्याटर जो निश्चित रूपमा सबै ती सानो चर्चहरूलाई 1 ठूलो चर्चमा बन्डल गर्न मद्दत गर्न चाहन्छ। तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दछौं। और तपाईं यस चर्चको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ? चर्चका सबै राम्रा योजनाहरू पूरा गर्न पैसा चाहिन्छ। त्यहाँ दृश्यहरू पछि पैसा छ (जस्तै मर्सेल म्यासेजिङ गल्तीले मेरो उपस्थितिमा भेटघाटमा देखाइएको छ) तपाईंलाई जान्न आवश्यक छैन। क्याथोलिक चर्चमा पनि पैसा छ, तर एक सदस्य बनेर तपाईं आफ्नो विश्वास पुष्टि गर्नुहुन्छ, र तपाईंले आफैंलाई चर्चमा गर्नुहुनेछ। तपाईंले अब यो विजेजे मिडियाको यो नयाँ चर्चको साथ पनि गर्नु पर्छ। तिनीहरूले तपाईंको लागि सत्य खोज्नेछन्। सबै पछि, तिनीहरू अब "विश्वसनीय साबित" छन्। आह, र यदि तपाई पहिले नै उस भरोसेमंद चर्चको सदस्य हुनुहुन्छ भने, तपाइँ लाई अब यस्तो बहिष्कार मार्टिन व्रिजल्याण्ड को समर्थन गर्न हुनेछैन, जो पनि सामाजिक सहायता लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन। सबै पछि, तपाईंले पहिल्यै एक क्लबमा योगदान पुर्याउनुहुन्छ जुन आफूलाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। नयाँ मण्डलीमा स्वागत छ। मिशन पूरा भयो। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
तपाईं सेवा भइरहेको छ
अब देखि तपाईं डी वेरी मिडिया को "वास्तविक सत्य" संग सेवा गर्न सकिन्छ। यो कसरी AIVD ले जंगल सिर्जना गर्यो र कसरी यो समाधान सुरु गर्दैछ। 'विपक्षी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यो आफैलाई नेतृत्व गर्न हो'। तर तपाईं कसरी थाहा छ कि AIVD पछि यसको छ? तिमीलाई कसरी थाहा छ कि यो जाँच गरिएको छ? पूर्व-बैंकर रोनाल्ड बर्नार्डको खुलासा लिनुहोस्! कसले मात्र बोल्छ? हो, अवश्य! जस्तै मैले भने, तपाईं सत्य खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईं सत्य संग सेवा गरिरहनु भएको छ। यद्यपि 'सत्य' अवश्य एक रिश्तेदार अवधारणा हो। के तपाईं समुद्रमा जहाज जहाजमा हुनुहुन्छ जब तपाईं सत्य देख्नुहुन्छ? कि तपाईं नजिकैको पानी छ, एक दूरीमा समुद्र तट हेर्नुहोस् र तपाईंको सँगी यात्रु घनिष्ठ हुनुहोस्; त्यो अयोग्य सत्य हो। तपाईंले देख्न सक्नुभएन किन के किनारामा हुन्छ। नियन्त्रण गरिएको जहाज किनाराबाट टाढा छ।
तल रेखाचित्रमा तपाईलाई ग्रेट कोष्ठा रेखाहरु हेर्न को लागी निकटता हेर्न को लागी छैन। र कहिलेकाहीँ तपाईंले टिप देख्नुहुन्छ। तर के तपाईं सबै कुरा एकैचोटि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ?
अर्को छवि मा (तल हेर्नुहोस्) तपाईं कालो र सेतो छवि स्पष्ट देख्न, तर गर्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्ड भन्दा अलि धेरै समय हेर्न भने (को4डट्स आफ्नो आँखा केन्द्रित), त्यसपछि आफ्नो आँखा आखा भ्किमभ्किम गर्नु र सबै कुरा माथि चमकता लग, तपाईंले "सुन्दर परिचित चरित्र" देख्नुहुनेछ। तपाईंले लुकेको तस्बिर देख्नुहुनेछ। यस तरिकाले सत्यको तपाईंको धारणा पनि खेल्न सक्छ। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंले केही कुरा सही देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले अझै पनि केही बिन्दुहरू सम्झनु भएको छ वा दृश्यात्मक छविलाई गहिरो छवि लुकाउँछ। के हो भने मुख्यधाराले मीडियालाई तपाइँलाई तल चित्रमा 'कालो' र "स्याट" वैकल्पिक मीडिया प्रदान गर्दछ? के के हुन्छ? तपाइँ अझै लुकेको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्न। र त्यो, मेरो विचारमा, वास्तवमा इरादा हो।
शब्द 'लाइट कर्ता' वैकल्पिक मिडियामा एक प्रिय शब्द हो। त्यो 'लाइट' अन्धकारमा देखाउँछ। वा रोनाल्ड बर्नार्ड जस्तो यो चलचित्र जब यसो भनिएको छ कि मान्छे भन्छन् कि एक समूह अहिल्यै अन्धकारमा बसिरहेका हुन्छन् र अन्धकारमा प्रयोग गर्न पाउछ। त्यसपछि सामान्य रोशनी हल्का र सबैलाई प्रकाशले भरिएको छ। रमाइलो लाग्दछ, तर त्यो प्रकाशले मात्र लुसिफरियन लाइटलाई बुझाउँछ। म त्यस पछि फिर्ता आउनेछु। तपाईंले आफैलाई सोध्नु भएको प्रश्न हो: यदि वैकल्पिक मिडिया मुख्यधारा मिडियाको ब्ल्याक तस्वीरमा 'सेतो' (लाइट) को प्रतिनिधित्व गर्दछ भने, के तपाईं सत्य वा सत्यको छाया देख्नुहुन्छ?
तपाईं कठिन प्रमाण चाहानुहुन्छ कि वैकल्पिक मीडिया AIVD द्वारा स्थापित गरिएको छ। तिनीहरू धेरै विवरणहरू छन् जुन म गर्छु, त्यसैले म बुझ्छु। यो माथिको तस्वीर माथि जस्तै छ; यसले तपाईंलाई कालो र सेतो देखाउँछ, तर लुकेको तस्बिर हेर्न सक्षम हुन, तपाईले लामो समयसम्म4थोप्टहरूमा घेरिएको छ, त्यसपछि आँखा झम्काउन र तपाईले के देख्नुहुन्छ भनेर ध्यान दिनुहोस्। म तपाईंलाई मात्र बनाइएको दृश्य छविको आकृति देखाउन सक्दिन। र तपाइँ कहिलेकाहीँ ती ती आरोहणबाट बताउन सक्नुहुन्छ कि मान्छेले कार्य गर्दछ र कथाहरू कालो छविमा 'सेतो' जस्तो देखिन्छ, तर तिनीहरू लुकेको तस्बिर मास्क गर्छन्। दृश्यात्मक छविमा लुकेको तस्बिर हेर्न, केवल आफ्नो आँखा झिम्क्याउनुहोस्।
रोनाल्ड बर्नार्डको कहानी त्यस अर्थमा एक आदर्श उदाहरण हो। रोनाल्डले तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछ जुन सही देखिन्छ। उहाँले तपाईंलाई कसरी बताउँछ बैंकिंग संसारले कसरी काम गर्दछ र बताउँछ कि राजनीतिज्ञहरू बैंकिंग प्रणालीका केटा केटा हुन्; पिरामिड को शीर्ष मा बैंकिंग प्रणाली। पिरामिडको माथिको बीआईएस बैंक हो। मध्य बैंकको तल र साधारण बैंक तल। उहाँ प्रसिद्ध ज्ञात पिरामिड चित्र बताउनुहुन्छ जुन एक घण्टाको लागि सक्रिय भएका सबैले पहिले नै वैकल्पिक मिडिया जान्दथे। रोनाल्ड प्रतीत देखि आफ्नो औंला सबै गलती स्थानों मा राख्छ! Irma Schiffer उहाँलाई अन्तरवार्ता र (जो coincidentally2मिनेट को चिटिक्क Masonic नम्बर लिन्छ) साक्षात्कार श्रृंखला को भाग 33 को अन्त मा पक्कै एकपटक कडी र क्रोधित मा आफ्नो कथा आकर्षित गर्न हिम्मत कुरा गर्न Masonic टाई फेरि जो कोहीले आकर्षित रोनाल्ड छ । यो शायद मिका काटी संग सम्बद्ध नियन्त्रित वैकल्पिक मिडियामा निर्देशित भएको थियो, जो बर्नार्डको सीवीको शिकार हुन्थ्यो। मैले यो फिल्मको उत्पादनको समयमा रोनाल्डको बारेमा लेखेको छैन।
म मुख्यstream मिडियामा एनएलपी विधिहरू मार्फत पोकिंग गरिरहेको छु, तर रोनाल्ड बर्नार्डले यसलाई पूर्ण-समय प्रयोग गर्दछ। विशेष रूपमा तल भिडियोको अन्तिम मिनेटहरूमा हात इशाराहरू स्पष्ट संकेतहरू दिन्छन्। हातहरू फैलाउने अचम्म सन्देश दिन्छ "म महान हुँ" (र तपाईं सानो हुनुहुन्छ); आत्म-नियन्त्रणको चुप टोन जुन क्रोधबाट फैलिएको छ अन्ततः एक अधिनियम आँसु संग; बिन्दु औंलाहरू भन्छन क्रोधित आवाज र शरीरको भाषाले तपाईंको भ्यालेन्ट राख्छ। रोनाल्डले ड्रेस शैली, हात इशारा र मौखिक रूपमा "म अधिकार पाउछु" को बेहोश सन्देश दिन्छ। सम्पूर्ण साक्षात्कार "अप्रत्याशित सत्य" संग interspersed छ र इर्ममा मुख्य रूप देखि कार्य छ 'हाँ' र 'सही' भन्न को लागी, आफ्नो मन adop adopive मोड मा राखन को लागि। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
मेरो पहिलो लेख रोनाल्ड बर्नार्डको बारेमा मैले वर्णन गरे कि यो कसरी पढ्न स्पष्ट छ कि त्यो एक अभिनेता हो। इरमा Schiffers पनि Derren ब्राउन 'चमत्कार बिक्री को लागि' विधि को उपयोग गरिरहेको छ (हेर्नुहोस यो चलचित्र) प्रशिक्षित गरिएको छ। निस्सन्देह उनको कथा पनि एकदम सही छ। त्यो एक कलाकार हो, HSP छ र .. राम्रो छ तपाईं आफैले भन्छ कि पढ्न सक्नुहुन्छ [उद्धरण]
जन्मे (थप क्र्यास भयो)3फेब्रुअरी फरवरी 1962 मा हिल्वरमम मा। Jungian चिकित्सक; सत्य खोजीकर्ता; कोच; lightwarrior; धेरै मानिसहरूलाई समर्पित, जनावरहरू र प्रकृति; संवेदनशील र एलर्जी को धोखा र भ्रष्टाचार, सहज चित्रकार; (पूर्व-) बासिस्ट; हो पनि एचएसपी; सामाजिक आदर्शवादी; हास्यको अर्थ, आध्यात्मिक र पार्थिव (सबै मा एक!) र optima फार्मेसी मा पानीवाला; म यसको लागि जान्छु स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, पारदर्शिता र ईमानदारी। प्राय: अरुलाई व्याख्यात्मक, सचेत र अजीब भनिन्छ "।
त्यहाँ हामीसँग 'lightworker' शब्द छ, जुन तपाइँले वैकल्पिक मिडियामा धेरै पटक हिट्नु भएको छ। के तपाईंलाई सम्झन्छ कि यो प्रकाशबाट आयो; कालो रङमा सेतो रंग छ? निस्सन्देह, इरमा उनको एचएसपी संग अत्यधिक संवेदनशील छ। यो एक राम्रो कुरा हो, किनकी यो (र AIVD बाट उनको समर्थन मार्फत) उनी अचानक जान्छन् कि कसरी 2014 देखि सबै साजिशहरूको बारे कुरा गर्न को लागी। तर यो केवल एक चीज होइन! इर्ममा पनि मध्यम छ। खैर, तपाईं इरमा संग राम्रो हुनुहुन्छ! त्यो लाग्छ सिर्फ या केहि सही छ र त्यो सेतो कपडा मा सेतो पेंट गर्दछ।
अब तपाईं सोच्न सक्नुहुनेछ कि म बस कल र प्रमाण संग नहीं आऊँ। के तपाईंले कालो र सेतो चित्रमा के हेर्नु भएको थियो? म आकृतिलाई रूपरेखा गर्छु। तपाईंले यसलाई हेर्न प्रयास गर्ने छ र सबैले यो देख्न सक्दैन। कहिलेकाहिँ प्रमाण प्रमाण प्रतीकमा र लुकेका सन्देशहरूमा निहित छ।
भर्खरै सम्म यी छुपाएका सन्देशहरू स्पष्ट रूपमा देखिने थिएनन् तर तपाईं देखाइने छ। एक मात्र समस्या हो कि तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईं त चर्च मा शायद पहिले नै हुनुहुन्छ र सबै बकाया र सहकारी फ्री मिडिया तिर्न वा आफ्नो भोग € 100 पहिले नै आनन्दित बी (आफै कल गर्न सक्छन् जो अहिलेसम्म कुनै बैंक) भुक्तान छ। तपाईं चर्चमा आक्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन स्पष्ट रूपमा अन्धकारमा हल्का बगाउनुहुन्छ? खैर, तपाईं प्रतीकत्वमा आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, एक पाठक रोनाल्ड बर्नार्ड [उद्धरण] को जोस बी (एर्क) को बारे मा निम्न उल्लेख गरे।
मैले लामो समयको लागि यो देखेको छु शुभ बैंकको गृह पृष्ठ। तपाईंले ध्यान दिनुभएको पहिलो कुरा निश्चित छ कि नारंगी लोगो जसले आफ्नो फ्रीमेसेन्समा फेलिक प्रतीकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको लागि सीधा अर्को "नारायण बैंक तपाईंको गठन" हो।
र अर्को टिप्पणीकारले निम्न [उद्धृत] भन्नुभयो:
डीबी लोगो डी ब्लिज बैंक को दर्पण गरिएको छ। के तपाईं फोटोहरू सहित रोथस्लिड पार्टीका ती फोटोहरू सम्झन सक्नुहुन्छ? निमन्त्रणा कार्डमा दर्पण गरिएको थियो यहाँ हेर्नुहोस्.
मिरर वास्तवमा 'रिवर्स स्प्याच' र अन्य 'उल्लेखित प्रविधि' को एलेस्टर क्रोली (लुसिफरियन) प्रविधि को लागि एक महत्वपूर्ण प्रतीक हो। आईने शोहरू, यो थिए कि, तपाईं लूसिफरियन हुनुहुन्छ। मुबारक बी को लोगोमा 'डी' आईना छविमा 'b' दिन्छ। यसबाहेक, एकअर्काका यी दुई पत्रहरू साँच्चै फेलिक प्रतीक (जसमा 'गठनमा रहेको बैंक' शब्दमा 'स्थापना' शब्दले एक फलोस निर्माणलाई बुझाउँछ) दिन्छ। त्यसैले त्यो लूसिफरियन प्रतीक हो। तर राम्रो छ, गरौं यो कठिन र केवल संयुक्त मान्छे आधार को लोगो मा एक नजर राख्नुहोस्। तपाईं पिरामिड पहिचान गर्न राम्रो तरिकाले हेर्न छैन। लुसिफरका समर्थकहरू र 'हामी सबै हो'का समर्थकहरू,' वन विश्व सरकार 'र' एक विश्व धर्म 'ले सधैं उनी लुसिफेरियनवाद देखाउँछन् किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यसले स्वतन्त्र इच्छाको व्यवस्थालाई आदर गर्छ। तिनीहरू पनि तपाईंलाई सत्य देखाउन चाहन्छन्, ताकि सम्पूर्ण चित्र रङ छ। तिनीहरू कालो पृष्ठभूमिमा सेतो बनाउँदछ, तर तपाईले मात्र लुकेको छविको व्युत्पन्न देख्नुहुन्छ।
संयुक्त मान्छे सबै मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्न चाहन्छ। त्यो ध्वनि धेरै लुसिफेरियन छैन? तपाईं पक्कै पनि पिरामिडलाई लोगोमा निर्दोषको रुपमा लिन सक्नुहुन्छ। के तपाईं आफ्नो YouTube भिडियोहरू मध्ये एक पृथ्वी मार्फत अरुण बोस् द्वारा 666 हात इशारा पहिचान गर्नुहुन्छ? वैकल्पिक मिडिया चर्चका प्रचारकहरूले तपाईंलाई देखाउन सक्ने कुन शिविरमा, तर लुकेको छ। तपाईं इरमा Schiffers को पछि तल भिडियो मा दर्पण को पहिचान गर्नुहुन्छ? (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
मेरो अघिल्लो लेखको उत्तरदायी एक (अहिलेसम्म प्रमाणिकरण नभएको) टिप्पणी जारी छ [उद्धरण]
यदि त्यो दीवारमा चिन्ह होइन? त्यसैले तपाईलाई पूर्व-शीर्ष बैंकर हुनुहुन्छ; पहिले नै वैकल्पिक मिडियामा भेट्टाउन सक्ने गहिरो स्पॉटहरूमा पोष्ट गर्दछ; इरमा Schiffers संग एक साक्षात्कार को एक सेट मा इकट्ठा; बैंक आफैलाई सुरू गर्न! रोनाल्ड र इरमा र वैकल्पिक मिडियाका अन्य सबै अभिनेताले तपाईंलाई राम्रो तरिकाले निर्देशित र धेरै विश्वसनीय कहानीको साथमा समझाएको प्रयास गरेको छ, जसमा सबै तत्वहरू भेट्न सकिन्छ कि हरेक सत्य खोजीकर्ताले वर्षौंमा भेट्टाउन सक्थे। यो एक शानदार संकलन र धेरै राम्रो राखिएको छ। तर यो अझै पनि तिनीहरूको वरिपरी उच्च स्तरको अभिनय छ। इर्मे Schiffers एक 1 महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु थिएन र सबै को रोनाल्ड बर्नार्ड को कथाहरु असंभव छ। यद्यपि, सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडियाले यो लेकिएको छ र यसको प्रयोग गर्न को लागी वैकल्पिक मेडिकल कोन्डरेटिभ व्रिज मिडिया बन्डल गर्न। तिनीहरूले तपाईंलाई (स्व-निर्मित AIVD) जंगल को माध्यम ले वैकल्पिक मीडिया साइटहरु को माध्यम ले रास्ता दिखाएगा (चाहे बिना मार्टिन व्रिजल्याण्ड मा इंगित हो)।
विलम्बन र अहिले?
राम्रो, निराशाको लागि धन्यबाद र अहिले के? मैले कसलाई भरोसा गर्न सक्छु र म अझै पढ्न सक्छु वा के गर्न सक्छु। "हामी शौचालय को बतख देखि शौचालय बतख को सलाह दिछन"धेरै सजिलो हुनेछ, तर म तपाईलाई मेरो लेख पढ्न विशेष गरी," विशेष गरी "नयाँ मण्डली" र "वैकल्पिक सेवा" लाई छोड्न, तर तपाईंको आफ्नै सहज संकाय र तपाईंको आत्मा सक्रिय गर्न सल्लाह दिन्छु। जडान गर्न। हो, 'हल्का कर्मचारीहरूले तपाईंलाई पनि भन्छ, तर तिनीहरू तपाईंलाई लुसिफरियन म्याट्रिक्समा राख्न चाहन्छन्। मलाई आशा छ कि तपाईं त्यसबाट बचाउनुहुनेछ। त्यसैले यदि वैकल्पिक मिडिया र मिडिया तपाइँको छवि रङ छ भने, तपाईंले चित्रद्वारा लुकेको छवि देख्नुपर्छ। तिनीहरू तपाईंलाई छुपाएको चित्र सम्झाउनुहुन्छ।
खैरो रेखाहरूसँग माथि छविमा फिर्ता हेर्नुहोस्। तपाईंले अब हेर्नु हुन्छ र त्यसपछि एक थोप्लो देख्नुहुन्छ र जस्तो देखिन्छ कि बिट्सहरू ती वैकल्पिक मिडियाद्वारा जडित हुन्छन्, तर तपाईले उनीहरूलाई सबैलाई एकैचोटि देख्न सक्नुहुन्न। तिनीहरू लुसिफरियन म्याट्रिक्सको कुल अनमास्कबाट टाढा राख्छन्। यद्यपि तिनीहरूले तपाईंलाई बताउदै कि बाल बलिदानहरू माथि तहहरूमा बनाइएका छन्। के तपाईंले रोनाल्ड बर्नार्डको व्यवहारमा पकाउनु भयो? वा तपाइँ बरु पनि शुभ चर्चको सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ? र नि: शुल्क मिडिया नबिर्सनुहोस्! तिनीहरू साँच्चै तपाईंको सहयोग चाहिन्छ!
यी सबै साइटहरू पनि गोप्य रूपमा पैसा कमाउँदै दानका लागि सोध्छन्। यो एक जानबूझाउने रणनीति हो, प्वाईस बाहिर प्वाल समात्नको लागि, जुन वास्तवमा बर्बाद भएको छ र रातो प्रतिशत छैन। उनीहरूले मार्टिन व्रिरेन्डनको कल्याणलाई सहयोग पुर्याएमा यदि गम्भीर सबै वेबसाइटहरू (AIVD द्वारा वित्त पोषित) सबै कुरा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ? दायाँ ..और त्यो वास्तवमा इरादा थियो।
भाषणको स्वतन्त्रता आधिकारिक रूपमा अवस्थित हुन सक्छ, तर तपाईं सजिलै सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा बर्बाद गरिनेछ। यस तरिकाले तपाइँ आफ्नो आलोचना पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि म सबै लिबेल र विरूपण र अनलाइन आक्रमणको कारण दानमा पूर्णतया निर्भर हुन्छु, म तपाईलाई सहयोग पुर्याउन चाहन्छु। यो साँच्चिकै एक गम्भीर अपील (नियन्त्रण नियन्त्रण साइटहरू जुन कल सबै लक्जरीमा राखिन्छ) को कलको विपरीत हो।
यो स्पष्ट गर्न कि म बूथ बेच्न सक्दैन, तपाईं यी दानहरूको आकार अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क.
सबै कुरा प्रश्न! आफैलाई सोच्नुहोस्। "लगभग सत्य" द्वारा मूर्ख नगर्नुहोस् र तस्विरमा रंग लगाउनु, ताकि तपाईले वास्तविक र लुकेको छविलाई बुझ्नु हुँदैन।
कुल भ्रमण: 2.492.437